Ngakwamukela Ukubuya KweNkosi | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
2018-11-07 01:45:26 13
Abazali bami bobabili bangamaKristu futhi kusukela ebuncaneni bami ngaqala ukuya nabo enkonzweni ukuze ngithamele izinkonzo. Lapho ngineminyaka eyi-12 ngahambela ikhempu enkulukazi yamaKristu eMyanmar, futhi ngenkathi ngilapho umfundisi othile wathi kimina: “Ukuphela kwendlela yokugwema ukufa beseungena embusweni wezulu ukubhaphathizwa.” Ngakho-ke ukuze ngingene embusweni wezulu nganquma ukubhaphathizwa ngenkathi ngikule khempu. Kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeka, ngaba ngumKristu wangempela.
Ngemva kokufinyelela ebudaleni, ngaba ngusihlalo wenhlangano yentsha ebandleni lami iminyaka eminingi, futhi noma nini lapho abashumayeli bengekho, ngangiye ngihole abafowethu nodadewethu ngomkhuleko, izifundo zeBhayibheli, ukucula izingoma, kanye nokwabelana ngobufakazi. Ngemva kokushada, ngabekwa esikhundleni sokwamukela iminikelo yangeSonto kanye nokweshumi. Ekuqaleni ibandla lethu lalinomsebenzi kaMoya oNgcwele: Umfundisi wayekhuluma kahle futhi ngokucacile, futhi abafowethu nodade babejabulela izintshumayelo futhi bezizwa ukuthi bayaqiniswa yizo. Wonke umuntu wayegcwele ukuzethemba, futhi sonke sasihambela izinkonzo zebandla futhi sisakaza ivangeli nakuphi lapho sinokukwenza ngentshisekelo enkulu. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi izintshumayelo zomfundisi zaba yimpindampindo futhi zingasenamdlandla, futhi zazingasakwazi ukuhlinzeka ngalokho esikudingayo. Ngakho-ke, ukuqiniseka kwabafowethu nodadewethu kwaqala ukwehla, futhi base beba nentshisekelo kakhulu emalini nasenjabulweni yenyama. Inani lamalungu ebandla laqala ukwehla, kwaze kwaba yilapho umfundisi kudingeka enze ubizo njalo ngoMgqibelo ukuze azame ukuthi wonke umuntu abe khona. Ngisho nalapho abafowethu nodade befikile babehlabelela izingoma ngokunganaki nangaphandle kokuzinikela, bazilalele ngesikhathi sezintshumayelo, bazixoxele ngezamabhizinisi uma nje izinkonzo ziphuma. Izinkonzo zase zingamazwi nje kodwa angenasisindo. Futhi ngangikhathazeke kakhulu ngalokhu. Ngazicabangela ngathi: “Ibandla lethu liphenduke kanjani laba amadlelo nje angenalutho?” Kodwa ngase ngikhumbula ukuthi eminyakeni engaphezu kwengama-30 eyedlule ngangivame ukuzwa abefundisi abahlukene besho into eyodwa: “Sikholwa eNkosini uJesu, ngakho-ke izono zethu zonke zithethelelwe.” “Sithola insindiso ngomusa kaNkulunkulu ngenxa yokholo lwethu.” INkosi uJesu seyivele iqedile umsebenzi Wayo wokuhlenga kanye, ngakho-ke thina abakholwa eNkosini sisindisiwe vele futhi siyongena embusweni wezulu. Ngenxa yalokhu, ukuthi “Ngisindisiwe vele, ngizongena embusweni wezulu” ngibe yisisekelo sokukholwa kwami ​​kuNkulunkulu. Kungakhathaliseki ukuthi ibandla lalibuthakathaka kangakanani, noma ukuthi abakholwayo babentekenteke futhi benganakile kanjani, ngangiyohlale ngizitshela ukuthi: “Kumele ngigcine indlela yeNkosi. Inqobo nje uma ngingashiyi iNkosi, ngeke ingishiye. Lapho iNkosi ibuya, iyongingenisa embusweni wezulu.” Nakuba ngangilokhu ngizixwayisa ngale ndlela, ngangisakwazi ukuqhubeka endleleni yeNkosi: Ngangona emini bese ngivuma izono ebusuku, kodwa noma nini lapho ngithandaza, ngangingayizwa iNkosi eduze kwami. Umoya wami wawumnyama futhi wawungenalutho, futhi ngangizizwa sengathi ngiya ngokuya ngiqhela eNkosini, njengokungathi yayingishiyile. Lokhu kwangibangela ukuhlupheka okukhulu, kodwa ngangingakwazi ukuthola umthombo wenkinga …
NgoFebhuwari 2016 ngahlangana noMfowethu uZheng noDade uLi Hui ku-inthanethi. Ngemva kokwabelana ngokuhlangenwe nakho mayelana nokholo eNkosini komunye nomunye, ngabatshela mayelana nokudideka kwami ​ngokuthi ibandla lase liphenduke amadlelo angenalutho. UMfowethu uZheng wathi kimi: “Akusilona nje ibandla lenu elibuthakathaka nelilahliwe: Umphakathi wonke wenkolo uphazamiseke njengamanje. Kufana nethempeli elase lishiyiwe laphenduka umhhume wamasela ngenkathi iNkosi uJesu yenza umsebenzi Wayo. Uma siqonda ukuthi leliya thempeli laphenduka kanjani incithakalo vele kwasekuqaleni, lapho-ke sizokwazi ukuthi kwenzeke kanjani ukuba ibandla lonkana liphenduke libe yincithakalo futhi libe buthakathaka kanje manje. Ngenkathi iNkosi uJesu iphetha iNkathi Yomthetho futhi iqala iNkathi Yomusa, uMoya oNgcwele awuzange wenze umsebenzi ethempelini kodwa kunalokho wawenza kulabo bantu abamukela futhi balandela iNkosi uJesu. Labo ababekhonza uJehova baphuthelwa umsebenzi kaMoya oNgcwele ngoba babengakwazi ukuhambisana nesivinini somsebenzi kaNkulunkulu. Ngaphandle kokuvikelwa nokunakekelwa nguNkulunkulu, bahlala esonweni, njengalokhu kwabonakala ithempeli labo seliphenduke indawo yokuthengisa izinkomo, izimvu, namajuba nokushintshanisa ngemali. Ithempeli kuqala elalibenyezela ngenkazimulo kaJehova laba umhhume wamaphangi, ngaleyo ndlela lacasula isimo sikaNkulunkulu futhi lafulathelwa NguYe ngokwenyanya. Lokhu kwaba esinye sezizathu zokuthi kungani ithempeli ekuqaleni lawela encithakalweni.” Sabe sesihlola amavesi amabili avela eNcwadini ka-Amose eBhayibhelini: “Futhi ngiyimisile imvula kinina, kusezinyanga ezintathu ngaphambi kokuvuna: ingxenye eyodwa yaniselwa, futhi lapho line khona akuzange kushe” (u-Amose 4:7). “Bhekani, izinsuku ziyeza, kwasho iNkosi UNKULUNKULU, engizothumela ngazo indlala ezweni, hhayi indlala yesinkwa, noma ukomela amanzi, kodwa eyokuzwa amazwi kaJehova” (u-Amose 8:11). Umfowethu uZheng waphinda wangithumelela imibhalo emibili yamazwi kaNkulunkulu uSomandla: “UNkulunkulu uyofeza leli qiniso: Uyokwenza ukuthi bonke abantu emhlabeni wonke beze phambi Kwakhe, futhi bakhonze uNkulunkulu emhlabeni, futhi omunye umsebenzi Wakhe kwezinye izindawo uyophela, futhi abantu bayophoqeleka ukuba bafune indlela yeqiniso. Kuyoba njengakuJosefa: Bonke babeya kuye ukuze bathole ukudla, futhi bamkhothamele, ngoba wayenezinto ezidliwayo. Ukuze bagweme indlala abantu bazophoqeleka ukuba bafune indlela yeqiniso. Wonke umphakathi wamakholwa ubhekene nendlala enzima, futhi uNkulunkulu wanamuhla kuphela ongumthombo wamanzi okuphila, umthombo ogeleza njalo owenzelwe ukuba abantu bajabule, futhi abantu bazoza bancike Kuye” (“Umbuso Weminyaka Eyinkulungwane Usufikile” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). “Kube empeleni, umsebenzi kaNkulunkulu okubo waphela kudala, futhi umsebenzi kaMoya oNgcwele awukho kubo. Umsebenzi kaNkulunkulu wadluliseleka kwelinye iqembu labantu kudala, iqembu ayehlose ukuqedela umsebenzi wakhe omusha kulo. Ngoba labo abakwezenkolo bayehluleka ukwamukela umsebenzi kaNkulunkulu omusha, futhi babambelela emsebenzini wakudala, ngakho uNkulunkulu ubalahlile labo bantu, futhi wenza umsebenzi Wakhe omusha kubantu abamukela lo msebenzi omusha. Laba ngabantu abasebenzisana nomsebenzi Wakhe omusha, futhi umsebenzi wokuphatha ungafezeka ngale ndlela kuphela” (“Umsebenzi KaNkulunkulu Nokwenza Komuntu” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). UMfowethu uZheng wabe esethi: “Amabandla njengamanje ayincithakalo njengoba ithempeli lalinjalo, futhi kungenxa yokuthi uNkulunkulu wenza umsebenzi omusha. INkosi uJesu ebesiyilindele ngokulangazela manje isizelwe enyameni futhi ibuyele phakathi kwethu. Ithathe igama elithi Nkulunkulu uSomandla ukwambula iqiniso nokwenza umsebenzi wokwahlulela, ukuhlanza nokusindisa umuntu ezinsukwini zokugcina. Ufikile ukuzophetha iNkathi Yomusa bese eqala iNkathi Yombuso. UMoya oNgcwele usevele uwashiyile amabandla manje useqala iNkathi Yomusa futhi manje usesebenza kulabo abamukela umsebenzi uNkulunkulu uSomandla wezinsuku zokugcina. Bonke labo abagcina nje igama leNkosi uJesu kuphela kodwa bengahambisani nomsebenzi omusha kaNkulunkulu abasenaye uNkulunkulu eduze kwabo, bengasenawo umsebenzi kaMoya oNgcwele, futhi ngeke baphinde banikwe amanzi aphilayo okuphila. Ngakho-ke, vele la mabandla azoqhubeka nokuba yincithakalo … ”
Ngokulalela uMfowethu uZheng, ngaqaphela ukuthi isimo namabandla namuhla sifana ncamashi namathempeli lapho iNkosi uJesu yaqala khona umsebenzi wayo. Nganginomuzwa wokuthi kwakukhona ukukhanya okusha nokuqondiswa kweNkosi kulokho uMfowethu uZheng ayehlanganyela ngakho. Kodwa ngangizizwa ngidideka kulokho ayekushilo mayelana neNkosi uJesu ibuyela ukwenza umsebenzi wokwahlulela nokuhlanza umuntu: Kungenzeka ukuthi iNkosi uJesu ibuyile, kodwa thina makholwa sase sisindisiwe vele, ngakho lapho iNkosi ibuya kufanele isiyise ngqo embusweni wezulu, hhayi ukwenza esinye isigaba sesahlulelo nomsebenzi wokuhlanza! Kodwa-ke ngabona ukuthi ukubuya kweNkosi kwakuyisehlakalo esikhulu ngakho-ke kufanele ngiqale ngifune kanzima izimpendulo.
Ngakho-ke, ngatshela uMfowethu uZheng ngokudideka kwami yena wathi: “Abafowethu nodade abaningi beNkosi banalowo mbono wakho. Babuye bacabange ukuthi ngenxa yokuthi samukele iNkosi uJesu njengoMsindisi wethu, khona-ke izono zethu zithethelelwe, sizothola insindiso ngomusa Wakhe, futhi lapho ebuya sonke sizongena ngqo embusweni wezulu. Ngakho-ke, beyenqaba ukwamukela insindiso kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina. Isizathu esiqavile salokhu ukuthi asiyiqondi imiphumela emihle umsebenzi weNkosi uJesu eyilethile futhi asiwazi umsebenzi kaNkulunkulu. UNkulunkulu uSomandla wathi: ‘Ngaleso sikhathi umsebenzi kaJesu wawungukuhlengwa kwaso sonke isintu. Izono zabo bonke ababekholwa Kuye zazithethelelwa; uma nje ukholwa Kuye, wayengakukhulula; uma ukholwa Kuye, wawungasesona isoni, wawukhululiwe ezonweni zakho. Yilokhu okwakushiwo ukusindiswa nokulungiswa ngokukholwa. Nokho, kulabo ababekholwa, kwasala labo ababehlubuka futhi bephikisa uNkulunkulu, okwakusadingeka baqedwe kancane kancane. Ukusindiswa akuzange kuchaze ukuthi umuntu wayesezuzwe uJesu ngokugcwele kodwa kwakusho ukuthi lowo muntu wayengaseyena owesono, okuwukuthi wayesethethelelwe izono zakhe: Uma nje ukholwa, wawungeke uphinde ube ngowesono’ (‘Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu (2)’ kwethi Izwi Livela Lisenyameni). ‘Yize uJesu enza umsebenzi omningi kubantu, waqeda kuphela ukuhlengwa kwabantu waba umnikelo wezono zabantu, wangasisusa isimo senkohlakalo yomuntu. Ukusindisa umuntu ngokugcwele ekuthonyweni uSathane akudingi kuphela ukuthi uJesu athathe izono zabantu njengomnikelo wesono, kodwa kudinga ukuba noNkulunkulu enze umsebenzi omkhulu ukuze kuqedwe nya lesi simo somuntu, esiye sonakaliswa uSathane. Ngakho, ngemva kokuba umuntu ethethelelwe izono zakhe, uNkulunkulu wayesebuyele enyameni ukuze aholele abantu enkathini entsha, waqala umsebenzi wokujezisa nokwahlulela, kanti umsebenzi Wakhe usubeke abantu endaweni ephezulu. Bonke labo abathobela ukubuswa nguNkulunkulu bazothokozela iqiniso eliphezulu bathole nezibusiso ezinkulu. Bazophila ekukhanyeni, bazuze iqiniso, indlela, nokuphila’ (kwesithi Isandulelo sethi Izwi Livela Lisenyameni). Kusuka emazwini kaNkulunkulu siyabona ukuthi umsebenzi weNkosi uJesu phakathi neNkathi Yomusa kwakuyilowo wokuhlengwa kwesintu. INkosi uJesu yabethelwa esiphambanweni ukuba ibe ngumnikelo wezono, ukusikhulula ekulahlweni ngumthetho. Ngokuza phambi kweNkosi, ukuvuma izono zethu, nokuphenduka, siyakwazi ukuthethelelwa ezonweni zethu. Lokhu kungukusindiswa. Ngamanye amazwi, ukusindiswa kusho ukuthi izono zithethelelwe futhi akukho ukulahlwa yisono phansi komthetho, kodwa akusho ukuthi siphunyukile esimweni sikaSathane esonakele noma esimweni sethu sobusathane futhi ngeke siphinde sone. Imvelo yethu yobusathane njengokuziqhenya nokuzidla, ubuqili nokukhohlisa, ubugovu nokuthobeka, ububi nokuhaha kusekhona. Ngenxa yokubusa kwesimo sethu sobusathane, sisaqhubeka senza izono njalo, sivukele futhi simelane noNkulunkulu. Ikakhulukazi uma kungahambisani nemibono yethu, sivame ukwahlulela uNkulunkulu ngokunganaki, siyammangalela uNkulunkulu futhi simelane noNkulunkulu. Ngabe isintu esinjengathi esonekele kakhulu futhi esimelana noNkulunkulu sithola kanjani indumiso Yakhe? Ingabe sifanelekile na ukungena embusweni wezulu? Uma uNkulunkulu asingenisa—isintu esonakele esimelana Naye futhi esingesikaSathane—embusweni Wakhe, khona-ke ngeke kube khona indlela yokuveza ukulunga nobungcwele bukaNkulunkulu. Ngakho-ke, ukholo lwethu eNkosini lusilethela ukuthethelelwa kwezono zethu kodwa hhayi ukuphunyuka okuphelele esonweni noma ukungena embusweni wezulu. Sidinga uNkulunkulu ukuba enze isigaba somsebenzi wokwahlulelwa kanye nokuhlanzwa ukuze kuguqulwe isimo sethu esibi futhi sisuse ngokuphelele izikhonkwane zesimo sethu sesono. Uma izimo zempilo yethu seziguquliwe, ngeke sisavukela noma simelane noNkulunkulu futhi siyokwazi ukumlalela futhi simkhulekele ngokweqiniso, sitholwe ngokuphelele Nguye, sisindiswe ngokuphelele Nguye futhi singene embusweni wezulu ukuze sizuze ifa alithembisile.”
Lapho ngizwa amazwi kaNkulunkulu uSomandla kanye nokuhlanganyela kukaMfowethu uZheng, ngabona ukuthi lokho iNkosi uJesu ekwenzile ngeNkathi Yomusa kwakuwumsebenzi wokuhlenga, hhayi umsebenzi wokuhlanza umuntu nokuguqula ngokuphelele isimo somuntu esikhohlakele. Njengoba abantu benza izono, kufanele babekwe icala futhi bajeziswe ngaphansi komthetho, kodwa ngenxa yokuhlenga kweNkosi, uma siza phambi kweNkosi uJesu futhi sivuma futhi siphenduka, khona-ke siyothokozela umusa Wakhe futhi sithethelelwe izono zethu. UNkulunkulu akasiboni njengabagcwele isono futhi uyasikhulula ekujezisweni, lokho-ke kuyinsindiso. Kodwa le insindiso ayisho ukuthi umuntu uhlanzwe futhi usindiswe ngokuphelele. Kubonakala sengathi abantu abaliqondi iqiniso, ngakho-ke banokungaqondisisi mayelana nokuthi iyini insindiso yangempela. Ngicabanga ngalokhu ukuthi manje sisaphila impilo yesono—senza izono bese sizivuma nsuku zonke—ngakho-ke yingakho sidinga esinye isigaba somsebenzi kaNkulunkulu wokwahlulela nokuhlanza. Lapho ngicabanga ngalokho umfundisi akusho ekhempini—“Indlela eyodwa yokuthi umKristu agweme ukufa futhi angene embusweni wezulu ukubhaphathizwa ”—Ngibona ukuthi le ndlela yokucabanga ayiwenzi ngempela umqondo. Singaze sisho ukuthi ingukucabangisa okwengane futhi iyihlaya. Kamuva lapho sengikwazi ukuxoxa isikhathi eside noMfowethu uZheng noDade uLi Hui futhi ngikwetshise kahle ukuhlanganyela kwabo, ngaba nomuzwa wokuthi kukhona iqiniso emazwini kaNkulunkulu uSomandla, ukuthi ayawenza umqondo kakhulu, futhi angangihlomulisa futhi angisize kokuningi. Kodwa ukubuya kweNkosi kuyinto enkulu, futhi ukuze kuphathwe njengokubaluleka kwakho nangokucophelela nganquma ukuqhuba uphenyo olunzulu ngomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla wezinsuku zokugcina.
Ngakho, emavikini alandelayo ngaqala ukucinga ku-inthanethi ulwazi ngomsebenzi wezinsuku zokugcina zikaNkulunkulu uSomandla. Ngaphambi kokungena ku-inthanethi, ngathandaza eNkosini: “Nkosi, uma uNyazi LwaseMpumalanga ngempela kuwukubuya kwesibili kweNkosi uJesu engikholwa Kuye, ngiyakuncenga ukuba ungikhanyisele futhi ungivumele ukuba ngilazi iphimbo Lakho.” Nginganakile, ngachofoza kuwebhusayithi futhi ngamangala ukuthi kwakuyikho konke ukwahlulelwa, ukuhlaselwa, nokusolwa kukaNkulunkulu uSomandla nebandla Lakhe kusuka emphakathini wenkolo kanye neCCP. Ngashaqeka kakhulu futhi ngaba novalo lokuthi ngase ngingene endleleni eyingozi. Ngakho, ngathumela ilinki kuMfowethu uZheng noDade uLi Hui futhi ngababuza: “Ingabe nikuchaza kanjani konke lokhu?” Ekuqaleni ngangicabanga ukuthi uMfowethu uZheng nabanye babengeke babe nayo impendulo kule mininingwane engangiyithumele, ngakho ngamangala lapho bephendula ngokungatatazeli nangesibindi: “UNkulunkulu uSomandla unguNkulunkulu wangempela, iNkosi uJesu ebuyile. Izinto umphakathi wenkolo kanye neCCP abazisakaza ku-inthanethi konke kuyinzwabethi namahemuhemu okwenzelwe ukudidisa abantu. Kuyingxenye yecebo labo elibi lokuvimbela abantu ukuba balandele uNkulunkulu …. ”
Lokho okwakushiwo uMfowethu uZheng kwangithinta ngempela, futhi enhliziyweni yami ngaqala ukuba nenkinga yokukuqonda konke lokhu. Ngaphuma ku-inthanethi ngase ngithandaza eNkosini: “Nkosi, uma uNkulunkulu uSomandla enguwe ngempela obuyile ngicela ukuba ungikhanyisele futhi ungicacisele ukuze ngikwazi ukuqonda indlela Yakho futhi ngingaphuthelwa ithuba lokubona ukubuya Kwakho. Uma konke lokho okuku-inthanethi kungamahemuhemu nje asakazwa ngumphakathi wenkolo kanye neCCP, kwangathi ungayigcina inhliziyo yami ukuze ngithole ukuqonda futhi ngingawalaleli amaqhinga kaSathane.” Ngemva kokuthandaza ngazizwa nginokuthula, ngase ngikhumbula izikhathi lapho nami nganginamekwe ngecala ngingalenzanga, kanye nesikhathi lapho umgcinisitolo othile engangimazi owayeqhuba ibhizinisi elilungile edayisa imikhiqizo ye-jade igama lakhe langcoliswa ngamahemuhemu asakazwa owayencintisana naye owayenomhawu. Ukukhanya okuncane kwaqala ukukhanya enhliziyweni yami futhi ngabona ukuthi leli zwe limnyama futhi limbi kangakanani nokuthi okuningi kwalokho okuku-inthanethi—okuhle noma okubi—abantu nje bezikhulumela nje. Ngabe sengicabanga ngokucophelela ngezinsolo zaku-inthanethi mayelana noNkulunkulu uSomandla nebandla Lakhe ezazisakazwa ngumphakathi wenkolo kanye neCCP: Kwakungekho ubufakazi obunikezwayo futhi akukho kulokhu okwakubonakala kukholakala. Ngaphezu kwalokho, ngangifunde amazwi kaNkulunkulu uSomandla futhi ngathintana nabafowethu nodade beBandla likaNkulunkulu uSomandla. Lokho ababekusho kwakungahlangani nokuhlangana namahemuhemu ayesakazwa ku-inthanethi, futhi babengazange bazame ukungiphoqa ukuba ngijoyine ibandla labo. Ezinyangeni ezimbalwa zokuxhumana nabo, ngaphandle kokuhlola iBhayibheli, ukufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, nokuhlanganyela ngamazwi kaNkulunkulu nami, sasingazange sikhulume ngokunye. Uma ngibuka indlela ababekhuluma ngayo, kwakubonakala ukuthi babengamaKristu alungile. Ukuhlanganyela kwabo kwakugcwele ukukhanya futhi ngangizwa ukuthi kwakuwusizo kimi, futhi ibandla labo laliyibandla ngempela elinemisebenzi kaMoya oNgcwele. Ngicabanga ngalokhu, ngabona ukuthi ibandla elinomsebenzi kaMoya oNgcwele liyibandla likaNkulunkulu, ngakho-ke uSathane uzolihlasela futhi aliphikise futhi kube khona inkulumo-ze engalungile elizungezile.
Ngosuku oluthile ngifunda ku-inthanethi mayelana nezenzo eziningi ezimbi ze-CCP: Ukuthi baxosha kanjani izithunywa zevangeli eChina, bashisa amaBhayibheli, badiliza amasonto, futhi bavalela baphinde babulala amaKristu …. Inzondo nentukuthelo ngeCCP yakhula enhliziyweni yami. Bangaba kanjani nobubi obungaka baze bashushise amaKristu angenacala, angahlomile? I-CCP elokhu yayiphikisana njalo noNkulunkulu ngokukhuthaza ukungakholwa kuNkulunkulu, futhi ebambe yashushisa amaKristu ngendlela enesihluku nobulwane, ngakho kwakungekho indlela yokwazi ukuthi ngabe lokho okwakushiwo kwakuyiqiniso noma amanga. Ngakho-ke, ngaqala ukuxhumana noMfowethu uZheng nabanye, futhi bahlanganyela ngamaqiniso amaningi aphathelene nomsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina nendlela yokwahlukanisa amacebo kaSathane obuqili…. Emva kokubalalela ngangizwa sengathi nginokuqonda kangcono umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina futhi ngangikwazi ukwahlukanisa ukuthi uvobe owawusabalaliswa nge-inthanethi ngumphakathi wenkolo ne-CCP konke kwakungamahemuhemu angenasisekelo nangenangqondo ayeyingxenye yamasu kaSathane okuvimbela abantu ukuthi bamukele umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla. Nganquma ukungalaleli lutho lomphakathi wenkolo kanye neCCP. Ukukhathazeka nokwesaba enhliziyweni yami kwanyamalala futhi, ngesikhathi esifanayo, ngaqaphela ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla kanye nomsebenzi weNkosi uJesu kwakufana futhi bobabili babeye babhekana nokuphikiswa nokumangalelwa yezombangazwe enobusathane okuvela kwabezenkolo. Kimina, lokhu kwaqinisekisa nakakhulu ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla yiyona ndlela yeqiniso!
Ngelinye ilanga lapho ngisebenzisa u-Facebook, ngezwa iculo elidumisa uNkulunkulu, engalizwa liwunyakazisa umphefumulo ngokukhethekile. Ngempela, uNkulunkulu kuphela ofanelwe udumo futhi ufanelwe ukuphakanyiswa. Le ngoma yayinokuhola kukaMoya oNgcwele futhi lapho ngibheka ukuthi ivelaphi, ngathola ukuthi ingenye yezingoma zeBandla likaNkulunkulu uSomandla. Ngahluleka ukuzibamba ngezwa izinyembezi zehla ngenxa yalokhu, futhi ngenjabulo ngafuna abafowethu nodade ukuba ngibatshele ukuthi uNkulunkulu unyakazise inhliziyo yami futhi wangihola …. Manje ngikholwa ngokugcwele ukuthi uNkulunkulu uSomandla uyiNkosi uJesu ebuyile, futhi ngizimisele ukulandela uNkulunkulu uSomandla kuze kube sekupheleni kwendlela.
Manje ngikhonza eBandleni LikaNkulunkulu uSomandla, futhi angigcini nje ngokujabulela ukuhlinzekwa ngamanzi aphilayo okuphila okuvela esihlalweni sobukhosi, kodwa ukuzethemba kwami nothando sekuhlunyelelisiwe. Okubaluleke nakakhulu, manje ngiyakwazi ukuhlukanisa phakathi kokulungile nokungalungile, ubumnyama nokukhanya. Ngiyazi ukuthi yikuphi okungamaqiniso futhi yikuphi okungamahemuhemu. Amaqiniso avela kuNkulunkulu, ngenkathi amahemuhemu evela kuSathane. Uma sizwa amahemuhemu, akufanele nje sihambisane nawo kalula nje kodwa kufanele sahlukanise ngokucophelela iqiniso namanga, sithandaze ngobuqotho, sifune ngokuthobeka futhi sihlole indlela yeqiniso. Yilapho kuphela-ke lapho siyokwazi ukuphunyuka emaketangeni amahemuhemu bese sibuyela phambi kukaNkulunkulu.
Okwedlule: Itabernakele LikaNkulunkulu Likubantu
Okulandelayo: Iposi “Lejuba”
uMa Xin, eChina Njengoba umyeni wami wayengeyena umuntu ozibandakanya emsebenzini wokwethembeka, wayevame ukuphuza utshwala futhi engabonakalisi…